Somalia: “Madaxweyne Farmaajo Xidhiidh Wanaagsan Ayaa Naga Dhaxeeya”Raysal Wasaaraha Somalia - Wargane News
Home Somali News Somalia: “Madaxweyne Farmaajo Xidhiidh Wanaagsan Ayaa Naga Dhaxeeya”Raysal Wasaaraha Somalia
Raysal Wasaaraha Dalkaasi Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo marti ku ahaa Barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Telefishinka SNTV ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaalada dalka iyo wada shaqeynta isaga iyo Madaxweynaha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumaddiisa ay ka shaqeyneyso dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, si loo gaaro horumar iyo is bedel la taaban karo
Waxaa uu sheegay in Xukuumadda iyo dowlad goboleedyada uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn, taasna ay dowladda dhexe ku bixineyso dadaal badan.
Mar la weydiiyay xiriirka isaga iyo Madaxweynaha ka dhaxeeya, iyo dhaqamadii horay looga bartay Madaxda dowladda ee khilaafyadii soo kala dhex geli jiray ayuu sheegay in isaga uu kalsooni 100% ku qabo wada shaqeynta isaga iyo Madaxweynaha.
“Kalsoonida aan ku qabo wada shaqeynta aniga iyo Madaxweynaha waa 100%, xiriirka aniga iyo Madaxweynaha naga dhaxeeya waa xiriir ku saleysan danta Umadda Soomaaliyeed, wax dan gooni ah aan leenahay aniga iyo Madaxweynaha ma jirto”ayuu yidhi Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay shacabka inay ku garab istaagaan niyad wanaaga ka dhaxeeya isaga iyo Madaxweynaha, waxaana uu balan qaaday inuu xoojinayo xiriirkaas sida uu yiri.
“Khilaaf kama dhaxeeyo shacabka, laakiin siyaasiyiinta ayaa inta badan khilaafka soo dhex galaa, waxaa kuligeen na saaran waajib ah in aan mar dambe qal qal gelin shacabka Soomaaliyeed”ayuu yidhi Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Dowladdihii ugu dambeeya ee dalka soo maray ayaa waxaa ragaadiyay khilaafyo soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, waxaana ugu dambeysay dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh oo khilaaf darteed sababtay inay yeelato 3 Ra’iisul Wasaare, iyadoo labo ka mid ah uu Baarlamaanka kalsoonida kala laabtay, xilkana laga qaaday.
Raysal Wasaaraha Dalkaasi Soomaaliya